Liverpool 1-4 Man Utd: Kooxda Klopp Oo Hal Meel Oo Uga Fiican Mida Mourinho Ka Hor Kulanka Sabtida %
Kulanka ugu weyn ee Isbuuca dambe sida weyn loo sugayo wuxuu yahay midka ay wada yeelan doonan kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaasoo ka dhici doona garoonka Reds, xili labadaan kooxood ay labaad iyo saddexaad uga jiraan EPL.
Sikastaba, Labo kamid ah khabiirada Shabakada Sky Sport, ee dalka Ingiriiska ayaa waxay qiimayn ay ku kala sameeyeen waaxyaha kala duwan ee kooxahaan, iyagoona soo xushay boos walba midka ugu fiica, laga bilaabo Goolhaye ilaa iyo weerar yahan.
Steve McClaren iyo Alex Scott, oo ah labada Fallanqeeye ee qiimayntaan sameeyay ayaa waxay rumeysan yihiin in Goolhayaha ugu fiican ay haysato Man United, wuxuuna noqon ayaa David De Gea, oo ay ku sheegeen mid kamid kuwa dunida ugu fiican.
Dhanka daafaca waxay mar kale ay siiyeen labadaan shaqsi kooxda uu hogaamiyo macalinka dalka Portugal udhashay ee Jose Mourinho, iyagoona waqti xaadirkaan Liverpool looga wacan yahay wacan yahay dhanka daafaca.
Dagaalka Khadka dhexe, waxaa mar kale, ku guuleysay Man United, waxayna sababta ku sheegay in [Nemanja] Matic, uu yahay midka saameyn keenay, inkastoo ay wax xoogaa amaan aan badneen ay siiyeen wiilasha Klopp.
Laakiin, meesha kaliya ee looga fiican yahay Man United ayaa waxay noqotay dhanka weerarka taasoo ah wax aan indhaha leyska indho tiri karin, balse waxay ku sheegeen in sheekadu ay tahay marka ay si wadar jir uwada joogaan Salax, Mane iyo Firmino.
Steve McClaren iyo Alex Scott, ayaa waxay siiyeen weerar yahanka kulankaan ugu fiicnaan kara laacibka dheer ee Red Devils iyo xulka qaranka Belgium-ka, [Romelu] Lukaku, iyagoona ku sababeeyay inuu yahay mid wax badan xakameyn kara.
KloppLiverpool vs Man UnitedMourinhoPremier League